ဟေး!!!!!!…..လေးဖြူသတင်းအမှားကြီးတဲ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဟေး!!!!!!…..လေးဖြူသတင်းအမှားကြီးတဲ့…
Posted by chityimhtoo on Mar 29, 2012 in News | 25 comments
လေးဖြူနှင့် Iron Cross ပရိသတ်များသုို့ …………….
ဂျာနယ်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသော လေးဖြူ၏ အင်တာဗျူးမှာ အမှန်တကယ်
မေးမြန်းဖြေဆုိုထားခြင်း လုုံးဝ(လုုံးဝ) မဟုုတ်ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာဖြင့် လုုပ်ကြံဖန်တီးထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေကြောင်းအရ အမြန်ဆုုံး ရင်ဆုိုင်ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Iron Cross (facebook) စာမျက်နှာ
အဲ့ဒါ ဘယ်ဂျာနယ်လဲကွ ဖွီးးးးးး ရွံထှာာာာ
ဇင်ယော်ကြီးရဲ့ Envoy ဂျာနယ်လေ။ ဇင်ယော်ကြီး ဘာလဲဆိုတာသိကြတယ်မဟုတ်လား။
ကျုပ်ကလဲ ic ရဲ့ပရိတ်သတ်တယောက်ပါပဲ…..
ကြည့်ရတာတော့ကြံ့ဖွံ့လက်ချက်ပဲနေမှာပေါ့…အနုပညာရှင်တွေကသူတို့ဘက်ကပါရင်ပြည်သူတွေက သူတို့ ဘက်ကိုမဲထည့်မယ်ထင်နေလားမသိပါဘူးအေ…..
အလဲ့ သစ္စာလင်းကို ထောက်ခံတဲ့လူချိသားဟ အစိမ်း ၂ ခါတောင်အပေးခံထားရတယ် အင်းပေ့ါ လေလောကမှာ ဘုရားတောင် မာန်နတ်နဲ့တွေ့သေးတာပဲ သူတော်ကောင်းကို ထောက်ခံတဲ့သူရှိသလို မထောက်ခံတဲ့သူလဲရှိနေတာ လောကဓမ္မတာပေ့ါလေ ….
ဖြစ်ရမယ်လေ……. ဒီလိုမှပေါ့… ဂွတ်ထ.. ဂွတ်ထ…
I think so that previous information is may be wrong. Please, kindly see the edge of right side on the Journal photo. What do you see?
လူတွေက အဲဒါပဲ ပြောချင်ရာ ပြောနေကြတာ… သေချာမသိပဲ ဇွတ်ပြောနေကြတယ်… အိုင်စီအဖွဲ့က ဘယ်လိုဆိုတာ ပရိသတ်သိနေတာပဲ။
ပုံ မှာ ပါတယ် လေ၊ ရေးထားတာမှ ပြူးနေတာပဲ လေ။ Entertainment တဲ့။
Vol 2, No 49 , 29,3,2012 Thursday တောင် တွေ့ နေရ သေး။
Envoy ဂျာနယ်ပါ။ Entertainment က အဲဒီ စာမျက်နှာရဲ့ပါတဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာပါ။
ကျေးဇူး ပဲ ထောက်ပြပေးတာ။
ဂျာနယ်တွေက ဒီလိုတော့ လံကြုတ်မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်….။ ကောင်းတယ်။ ဒါမျိုးက တရားစွဲသင့်တာ..။ အိုင်စီပါတာနဲ့ လူငယ်တွေ ပါရောလား။ ဒါက ယုံကြည်မှုနဲ့ ဆိုင်တယ်ထင်တာပဲ…။
Dear Laipai, i don’t mean ” Entertainment” and it’s big and clear to see. I mean the small logo, beside of “Entertainment”. May you just find it. What is it, Journal Name? I don’t know.
Do you meant ” MGazette “?
It is the short of Mandalay Gazette, added by MG Admin ( U Kai ).
First it was full ( Mandalay Gazette ). Later changed as now ( MGazette ).
If any one copy and use the photo from MG, we can know easily.
Please try to read older posts from MG.
It will help you to understand What is Mandalay Gazette and Where is its’ Direction.
သေချာဂဃနဏသိချင်လို့ ….. ပထမပို့စ်ကို ရှာဖတ်ဦးမှပဲ … အဟီး ..
comment အသွားလာကြည့်ရတာ .. ပြည်သူ့အချစ်တော် လေးဖြူတစ်ယောက် ပြီးခဲ့တုန်းကလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို မဲပေးပြီး .. အခုလည်း … ဘယ်ပါတီကို မဲပေးရမှန်း မသိဘူးဖြေလို့… အားမလို အားမရဖြစ်နေကြတာထင်ပါတယ် … ။
တကယ်တမ်း … သူလည်း သူ့စိတ်ကြိုက်မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ် … ။ သူကြိုက်တဲ့အဖွဲ့သူမဲပေးတာ … အမြင်မတူလို့ …သူ့ကို အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး … ။ ဒါသူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ … ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပါပဲ … ။ ကျွန်မတို့ တကယ်တမ်း လုပ်နိုင်တာက .. NLD အတွက် မဲဆွယ်ယုံပါ …. ။ ထည့်တာ မထည့်တာကတော့ … သူ့အပိုင်းပေါ့လေ … ကျွန်မတို့ အားပေးတာ .. သူ့ရဲ့ .. သီဆိုဖျော်ဖြေမှု အနု ပညာပါ … ။ မဲပေးတာ မပေးတာနဲ့ပတ်သတ်လို့တော့ … သူ့ပရိတ်သတ်လျော့သွားမယ်လို့ ကျွန်မ မထင်ဘူးလေ … ။
ကဲကဲ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ ဂျာနယ်မ ပါးချခံရတဲ့ ကိစ္စက ပြန်ပြောမယ်
ဂျာနယ်ဆို အဲ့ကပြန်ပြန်စရမယ် ဒါမှ တဆင့်ပီး တဆင့် ဘူမှားဒယ် မှန်ဒယ်ဆိုပီးတွားလိမ့်မယ်
Fully agree what was said by @etone.
ဂျာနယ်လစ်တွေကလည်း ကြောက်ရတယ်။ စာနဲ့ ရေးပေးရင်တောင်မှ ပွဲဆူစေမဲ့ စာသားလေးတွေလောက်ဘဲကွက် ထည့်ရေးပြီး လုပ်သွားတာ ခံရတတ်တယ်။
အမေး အဖြေ ပါးစပ်နဲ့ လုပ်သွားတာ ဆိုရင်တော့ နာဖို့သာ ပြင်ဘဲ။
ဟွန် . . ဒါဆို သတင်းမှား ကြီး ကို အားလုံး အာရိုုက်နေမိတာပေါ့လေ
သတင်းတိုင်းကို စီစစ်ဝေဖန်တာ သင့်မြတ်လျော်ကန်ပါတယ်
အမှားကို အမှန်ပြင်ပေးနိုင်တာ မင်္ဂလာတပါးပါ
အခုကရော သတင်းမှားတယ် ဆိုတာ မှန်ရဲ့လား ဟင်
ထစ်ကနဲရှိ မီဒီယာကို တရားစွဲတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ….
ဒီလောက် မီဂါ စတားကြီးရဲ့ …မီဂါတော်ကီးကြီးကို
ဂျာနယ်ဘက်ကလည်း မသေချာဘဲ ရေးပါ့မလား ဆိုတာ တွေးစရာပဲ..
ဂျာနယ်ဘက်က ဘာပြန်ကြေငြာချက် ထွက်မလဲ သိချင်သား….
ဟိုတလောက ကိစ္စလေးလို .. ညှိနှိုင်း စေ့စပ် ဆွေးနွေးပြီး…
ဂျာနယ် ကပဲ ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန် ဆိုပြီး
မာယာ ဆိုတဲ့ ကော့မန့် ပိုင်ရှင် ကို အနုတ် ပေးခဲ့သည်။ “ပြည့်နှက် နေသော” လို့ ပြောရအောင် သန်း 60 လုံးကို လိုက် မေးပြီးပလား ….. ?
စိတ်ထဲမထားပါနဲ့ဗျာ .. ကျုပ်လဲ လျှာဝင်ရှည်တာပါ။ လူ့စိတ်ဆိုတာ ကလဲ အပြောင်းအလဲ က မြန်တတ်တာ သဘာဝ ကိုးဗျ။ ခု ကောင်းနေပေမယ့် တော်ကြာ ဆိုးချင် ဆိုးမှာကိုးလို့ နော့။
လေးဖြူတော့နာမည်ကြီးစရာမရှိ မဲပေးတဲ့ကိစ္စနာမည် လာကြီးနေပြန်တယ် အိုင်စီတဖွဲ့လုံးဘယ်မဲပေးပေးပါ သူတို့ပေးတဲ့မဲ လည်းအရေးမကြီးဘူးမပြောပါဘူး သူတို့ပေးရုံနဲ့ပြီးမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာ ဂျာနယ်တွေရောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေ တာလည်းပါတယ်